Guta guru reBulgaria rinoenderera mberi nekukiya pakati pe COVID-19 spike
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Guta guru reBulgaria rinoenderera mberi nekukiya pakati pe COVID-19 spike
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bulgaria Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Guta guru reBulgaria rinoenderera mberi nekukiya pakati peCVV-19 hutachiona spike
Gurukota rezvehutano reBulgaria, Kiril Ananiev akazivisa kuti vese vanoenda nekudzoka kubva kuSofia vacharambidzwa kudzamara zvaonekwa, mushure mekuvhurwa Covid-19 hutachiona hutachiona muguta guru. Kurambidzwa kwekufamba kunoitika pakati pekufunganya pamusoro penjodzi yekuenderera mberi nekupararira panguva yeIsita yeOrthodox.
Sekureva kwegurukota, vese vanoenda nekudzoka kuSofia, kumusha kune vanhu vangangosvika mamirioni maviri, zvakarambidzwa, zvinoshanda nekukasira, kunze kwekutakura zvinhu uye vanhu vanofanirwa kufamba kuenda kubasa, kana kurapwa kuchipatara.
Vanhu veBulgaria vanga vachidzidzira kusimukira munharaunda uye vakapfeka masiki ekudzivirira.
Bulgaria yakanyoreswa pamusoro pemakumi mana emakesi matsva neChitatu neChina, zvichiunza huwandu hwacho kusvika ku40, kusanganisira makumi matatu neshanu vakafa. Inopfuura hafu yezvirwere zvakasimbiswa zviri muSofia.
Nyika yeBalkan yakanga yatobvisa kufamba kusiri-kukosha pakati peguta munaKurume, asi matanho akasimbiswa mushure mekunge mota dzinopfuura zviuru zvishanu dzakaedza kusiya Sofia nemusi weChina pasati pazororo reEaster.